गाईगोरुको अमर्यादित निकासी नियन्त्रण गर | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०८:४६
हिन्दूहरुको लक्ष्मीको प्रतीक गाई तथा देवादिदेव शिवको बाहन गोरुप्रति मर्यादा गरिएको थियो । राष्टिूय जनावर गाई र यसबाट जन्मेको बाच्छा, गोरुको संरक्षण गर्ने पुरानो कानूनमा ब्यबस्था थियो । तर विशेषगरी जनयुद्धमा गाउँगाउँमा गाईगोरु काट्ने, मासु खाने, खुवाउने गरियो ।
बद्लिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा गाईलाई राष्टिूय जनावरबाट हटाउन घुँडा टेकेर केही लागे । तर झण्डै ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको देश भएकाले चौतर्फी बिरोध भयो र राष्टिूय जनावरको रुपमा गाई कायम त भयो तर गाईको संरक्षणको बारेमा कानूनमा केही उल्लेख भएन ।
त्यसपछि गाईगोरुको अवैध कारोबार सुरु भयो । जथाभावी ओसारपसार हुन थाल्यो । नियन्त्रण गर्न कानूनले केही उल्लेख नगरेपछि प्रहरी प्रशासन देखे पनि नदेखे जस्तो गरी बस्न बाध्य भयो । काटमारको उद्देश्यले भएको ओसारपसारमा पशुसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय पनि मौन बस्न बाध्य भयो । यो गतिबिधि बहुल नेपालीका लागि पाच्य छैन । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिनुपर्दा सबैले यसप्रति दुख ब्यक्त गर्छन्, तर औपचारिक रुपमा कारबाही गर्न कानूनले बाटो दिएको छैन ।
त्यसैले प्रहरी, प्रशासन, नियमन गर्ने अधिकारी, सर्वसाधारण नागरिक मुकदर्शक हुनु परेको अबस्था छ । गत बुधबार गोरखामा दुई टूक गाईगोरु प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । कारबाही गर्ने प्राबधान नभएपछि क्वारेण्टाइन चेकजाँचको कागजपत्र खोज्यो । सबै दुरुस्त भएपछि भेटरीनरी अस्पताललाई बुझायो । भेटरीनरी अबस्पतालले पनि नियन्त्रणमा लिइराख्न कानूनी आधार भेटेन, छाड्यो ।
थाहा छ, ती गाईगोरु काटमारका लागि लगिएका हुन् तर लाने ब्यबसायीहरु भन्छन्, जोत्न लगेको हो । ‘हैन’ भन्नका लागि कुनै प्रमाण, आधार छैन । काटमारका लागि लगेको हो भनेर खुल्लमखुल्ला भनिहाले भनेपनि कारबाही गर्ने कानून छैन । राष्टिूय जनावर, त्यसमाथि पनि बहुल नेपालीको देवदेवीको प्रतीक मनिएको गाईगोरुको ओसारपसार यस्तो अबस्थामा गुज्रिरहेको अबस्था छ । त्यसैले मुलुकले यसलाई नियमन गर्न, नियन्त्रण गर्न कानून बनाएर कारबाहीको बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।